Home » Best Web Awards » မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း အမှတ်(၅)
မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း အမှတ်(၅)
Posted by Mr. MarGa on Jul 15, 2012 in Best Web Awards, Creative Writing, Myanmar Gazette, Poetry | Comments Off on မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း အမှတ်(၅)
ကဗျာပြခန်း အမှတ်ငါး မှ ကြိုဆိုပါ၏။
ပထမဆုံး အရင်ပြခန်းက ဆောင်းပါး အဆက်ကို ခံစားကြပါဦးစို့လား……..
ခေတ်ပေါ်ကဗျာသည် မိဘမဲ့မဟုတ်။ ရှေးခေတ်ဟောင်းမှ မွေးဖွားလာသူ၊ သို့သော် အတိဇာတ သားသမီး၊ ဝမ်းဗိုက်ဖောက်၍ မွေးရသည်၊ ဘာကြောင့်လဲ။
ပြည်သူများမှ ခေတ်အဆက်ဆက် ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရသဖြင့် နာကျည်းနေကြသည်၊ လွတ်လပ်ချင်ကြသည်။ ပြည်သူတို့သည် သက်သာချောင်ချိသော စီးပွားရေးစနစ်ကို လိုချင်နေကြသည်။ လေးယောက်စီး မှန်ကားနှင့် မသွားရချင်နေပါစေ၊ အချင်းချင်း ထိ၍ပင် ဖြစ်စေ၊ ဈေးပေါပေါ စီးရသော ဘတ်(စ်)ကား နှင့် လမ်းတိုင်း ပေါက်ချင်သည်။ ယင်းသို့ လူထုကြားထဲမှ လူထု သားသမီးများသည် သူတို့၏ စိတ်ဝေဒနာကို ဖွင့်ဟချင်ကြသည်။ ထိုအခါ ခေတ်ပေါ်ကဗျာသည် အရင်းရှင်ဝမ်းဗိုက်ကို ဖောက်၍ ထွက်လာရတော့သည်။
ရှေးကဗျာသည် ရင်ခုန်သံကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာသည် ရင်ခုန်သံကိုပင် ကိုယ်စားပြုပေသည်။ မိဘ၏ နှလုံးသားအတိုင်း သားသမီး၏ နှလုံးသားသလည်း အာရုံ၏ ထင်ဟပ်ချက်အရ စိတ်လှုပ်ရှားပေသည်။ ခံစားပေသည်။ မခြား။
သို့သော် ကတ္တီပါ မှီအုံး၌ အရောင်လွင့်လာလျှင် သူက ငြိုငြင်၏။ ပန်းကန်ရွှေရေး ပြယ်လျှင် မဲ့၏။ ယနေ့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာကား မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ ချောင်းထဲမှ ပက်ထားသော ရှားရှားပါးပါး နေပူလှမ်း ငါးကို ကျီးက ချီသော် ဒေါသထွက်ရသေးသည်။ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်လျှင် မဲ့သည်။
ဖိနှိပ်သူဘက်က ရပ်သော ကဗျာတို့ကား ဟောင်းရပေမည်။ ဖိနှိပ်ခံရသူဘက်မှ ကဗျာတို့ကား သစ်ရပေမည်။ ဤကား ထူးခြားချက်ပင်။
ယနေ့ကဗျာသည် လူငယ်များ၏ ဖော်ပြချက် ဖြစ်နေသည်။ ရှေးက ကဗျာကို ခက်အောင် ရေးရသည်။ ရွယ်ရင့်ပညာရှိများမှ နားလည်သည်။ သို့မှလည်း ကဗျာစစ်သည်။ ယခုအခါ လူလားမြောက်စ စာရေးတတ်လာလျှင် ကဗျာစပ်ချင်သည်။ ဤကား ယနေ့ခေတ် မြန်မာ့အချင်းအရာတစ်ရပ် ဖြစ်နေပေပြီ။
ယနေ့ လူငယ်များသည် ဆန်းအလင်္ကာကျမ်းများကို စာမေးပွဲမေးခွန်းလွှာများတွင်သာ မြင်ဘူးကြသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ အရပ်ထဲမှ ညည်းသံ၊ ငြူသံ၊ အသံဗလံတို့ ကြားရသည်။ အရပ်ထဲမှ ရုန်းကန်မှုဘဝတိုက်ပွဲတို့ကို မြင်နေရသည်။ ဆိုရှယ်လစ်ရေးနှင့် ဆိုရှယ်လစ် ဆန့်ကျင်ရေးတို့၏ ပဋိပက္ခကို တွေ့နေရသည်။
ယင်းတို့သည် သူတို့၏ ဆန်းအလင်္ကာသစ်များ ဖြစ်နေကြသည်။ လူထု၏ အသံသည် သူတို့၏ ကာရန်၊ လူထု၏ ခံစားမှုသည် သူတို့၏ ဆန်းအလင်္ကာ။
ရှေးက ကဗျာကို နန်းတော်က ပိုင်သည်။ ထို့နောက် ဇာခန်းဆီးက ပိုင်သည်။ ယနေ့ကဗျာကို ပြည်သူက ပိုင်လာပေပြီ။ ရှေးက ကဗျာရေးရန် ခက်သည်။ ယခု လွယ်လာရပေပြီ။
ယနေ့ ဘာတော်လှန်ရေးလဲဟု ယနေ့ခေတ်ပေါ်ကဗျာအား ညွှန်းရပေမည်။ ယနေ့ခေတ် လူငယ်များ၏ ကဗျာတွင် ယနေ့လှုပ်ရှားနေသော ခေတ်ရုပ်ပုံလွှာကို တွေ့မြင်ရစေသတည်း။
ဒီတစ်ပတ် ပြခန်းက ကဗျာတွေကတော့ အောက်ပါ အတိုင်းပဲပေါ့။
စာသားတွေကို သီးသန့်ခံစားချင်ရင်တော့ဒီစာကြောင်းကို နှိပ်လိုက်ပါ
ပြောလိုက်ပါဘိ ဟောပါဘိ (ဇော်ဂျီ)
မပွင့်ခဲ့ဘူး……..ဒါပေမယ့် မကြွေတော့မှာလဲ သေချာတယ်
ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော် တူမှ မတူတာ
ရာဇ၀င်ရိုင်းစေတဲ့ အရိပ်ဆိုးကြီးကို ကမ္ဗည်းတင်လိုက်ရတယ်…။
တစ်ချက်ချင်း တစ်စချင်း လွင့်စင်ပေါက်ကွဲသွားလိုက်ပုံက
ဒီမြေ ဒီရေ ဒီလူတွေကြားမှာ
ငိုကြွေးနေတဲ့ နှလုံးသားတွေ ထပ်တူစုလို့
သူရဲကောင်း ခါးဆက်ပြတ်တဲ့ ဒို့တိုင်းပြည်မှာ
ဒီသမိုင်းကို ထုဆစ်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်ဘူး။
အာဇာနည်မျိုး သေရိုးမရှိ တဲ့
ကျုပ်တို့နဲ့ ခင်ဗျားတို့ တိုင်းပြည် တန်ကိုမတန်တာ
နောက်အနှစ်တစ်ရာမှာ ပေါ်ခဲတဲ့ ခေါင်းဆောင်ပြောကြဦးမှာလား
သတိရ ရင် ကျုပ် အကြောင်းပြောပြီး
ကျုပ်လဲ အိပ်မက်က လန့် နိုး လာတာပေါ့…………။
အိုဘယ့် ရေလျှင် မရပ်နိုင်ပြီ
အိုဘယ့်အမေ တုနှိုင်းမမှီတည့်။ ။ ။
ငါတို့မြေ ငါတို့ရေမို့ ငါတို့ပိုင်သည်
စွမ်းဆောင် ကြိုးပမ်း သူတထူးကား
တုနှိုင်းမမှီအဖပေတည်း။ ။ ။
ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေ ကိုယ့်အမွေမို့
ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွား အော်ခဲ့ပြီ။ ။ ။
အိုဘယ့်အဖေ တုနှိုင်းမမှီတည့်။ ။ ။
မမေ့အပ်တာ July 19 တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ
ဒီးဒုတ်ကြီးကဦးဘချို မမေ့ချန်ထား ပညာရာဇတ်ကို
စော်ဘွားမိုင်းပွန် စဝ်စံထွန်း ဘဝင်းဝန်ကြီး ကံဆိုးလွန်း
သခင်မြနှင့် မန်းဘခိုင်၊ အတွင်းဝန်က ဦးအုန်းကြိုင်
မြေခ ကြွေကျလို့ ဆင်းသက်။
အမေ ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ် တစ်ခုအတွက်..
သွေးချွေးတွေနဲ. ပေးဆပ်နေခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်…
မှီခိုအားထားရာ အပင်လဲ ခဲ့ပေမယ့်…
လောကအလယ် သားမမယ်ကို အားတင်းကျွေးမွေး
လူလားမြောက်အောင် မြေတောင်မြှောက်ပေး ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်….
အဖ မဲ့သား ရေနဲငါး ကို ရေကန်အပြည့်
ပခုံးနဲ.ထမ်း ရေဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့.. သူတစ်ယောက်…
စာအုပ်တွေနဲ. ဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်…
အဖေ့တာဝန် အမေ့ဝတ္တရား မခွဲခြားပဲ..
တည့်မတ်ပြုပြင် လှမ်းတင်ပေးခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်…
ရှုံးနိမ့် သားငယ် လူမမယ်ကို
ထောက်ပံ့ တွဲထူပေးခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်..
ဆုံးဖြတ်မှန်စွာ အသိသညာ ကို ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်….
ထိုအကြင်သူအား ရင်သွေးသားမှ အမေဖေ ဟု
= တမင် ငြိုးတဲ့ မိုးဖွဲတွေကြားက
ဇူလိုင် ၁၉ ရဲ့ခပ်ဆိုးဆိုးသေနတ်သံတွေ….
ငါတို့ ရဲ့အာဇာနည်ကို ဆွဲခေါ်သွားခဲ့
= အတ္တနဲ့ရက်စက်ယုတ်မာခြင်းကိုမှ
သူရဲကောင်းဆိုတာ… လိုသလောက် မရဘူး ။
= ပက်စက်တဲ့ လုပ်ရပ်
လျှာ ပြတ်ထွက်မတတ် တောက်ခတ်လွန်းလို့ ….
ငါတို့ခံတွင်းလည်း…. သွေးချင်းချင်းနီခဲ့ ပြီ ။
မျက်ရည်ပြိုင်မိုး….. သွန်းခဲ့တဲ့၁၉ ရက်
သူတို့ နှုတ်ယူလိုက်တဲ့အသက်တွေထဲမှာ….
ငါတို့ ရဲ့ရင်နှစ်သည်းချာ ကံကြမ္မာတစ်ခု ပါသွားတယ် ။
ကျေနပ်စရာ မရှိဘူး ။
= အေးးးးး မက်မောတယ် …
ပြော မကုန်တဲ့သူ့ပြည်ချစ်စိတ်တွေနဲ့ 
ပစ်ရက်စရာ မရှိဘူး ။
= ဟောဒီ မိုးစက်တွေ ကျတဲ့ဇူလိုင် ၁၉ ရောက်တိုင်း…..
ငါတို့ရင်ထဲက ပြန် နာလာတယ် ။
မျိုးချစ်စိတ်ကို ၀တ်ရုံလို ခြုံပြခဲ့တဲ့ အာဇာနည်…..
မေ့ ရက်စရာ မှ မရှိတာ…….။
= ငါတိ်ု့သမိုင်းကို တစ် ပြန် စ ပြီး….
သခင်အောင်ဆန်းကို ပြန်လိုချင်တယ် ….
သူရဲကောင်းဆိုတာ… လိုသလောက်မှ မရတာ….။
= ရာဇ၀င်ရိုင်းတဲ့သုတ်သင်ခြင်းတွေကြောင့်
ငါတို့သခင်ကို စတေးခဲ့ရတယ် …..
ငါတို့သခင်ကိုပဲ ပြန်လိုချင်တယ် ….
ငါတို့သခင်ကိုပဲ… ပြန် လိုချင်တယ်…..
ယနေ့ ထိပင် ရှိစေချင်သည်
တို့ ဘိုး တို့ ဘွား
တို့ ရဲ့ ဗိုလ်ချူပ်ဇာနည်
တို့ ဗိုလ်ချုပ်နှင့် အာဇာနည်တချို့
ယနေ့ ထိတိုင် မမေ့နိုင်ပါ ။
၁၉ ဇူလိုင် ရောက်သည့်တိုင်
ဂူဗိမ္မာန်သွား အလေးပြုချင် ယခုပင်။
ငါလေးစားသည် နီမြန်းသောပန်း ငါ့ရင်မှာလန်းဆန်းသည့်သို့
ကာကွယ်ပါမည် အမိမြေလေး သာယာစေဖို့
ဆူးခင်းလမ်းသည် ယခုအခါ ပန်းခင်းလမ်းအသွင်
မာယာများတဲ့ ခေတ်အလည်မှာ သင်သို့သိစေ
မလျှော့သောဇွဲ လုံ့လအားထုတ် ကြိုးစားပြုလော့
အရေးကြုံရင် ရှိရာလက်နက် ကိုင်စွဲပြုလော့
ငါတို့တိုင်းပြည် သာယာစေဖို့ သွေးချောင်းမျက်ရည် ကျဆုံးစေဖို့
မင်းတို့ ငါတို့ ရင်မှ ကိန်းအောင် အစဉ်ဆောင်ပါ
သူရဲကောင်းတို့ စံပျော်ရာ ငါတို့နေရာလေးမှာ
မင်းလည်း အသင့်ရှိမယ်ဆိုတာ ……………
ကျွန်တော်စီးတဲ့ ဖိနပ်တံဆိပ်လည်း ခင်းဗျားသိမှာမဟုတ်ဘူး။
ခင်ဗျားနင်းခဲ့တဲ့ လည်မျိုတွေ ခင်ဗျားမမှတ်မိသလို
ကျွန်တော်ကိုတွန်းချနေတဲ့ လက်တွေကိုလဲ မှတ်မိတော့ဘူး။
ခင်ဗျားက လောကဓံကို ဖယောင်းတိုင်းမီးမှုတ်သလို ချူပ်ငြိမ်းလို့ရပေမဲ့
ကျွန်တော်က ဒုက္ခတွေကို တစ်စတစ်စလိုက်ကောက်လို့ မဆုံးဘူး။
ခင်ဗျားဒုက္ခက ကျွန်တော်ဒုက္ခထက် တစ်ခါတစ်ခါ ပိုများနေမလား။
ကျွန်တော်က အရာရာမဖြည့်စီးနိုင်တဲ့ လိုအပ်မှုနတ်သားဖြစ်တယ်။
ခင်းဗျားက အမှားကိုအမှန်လုပ်တတ်တဲ့ ပါရဂူ
ကျွန်တော်က အမှန်ကို အမှန်မပြောရဲတဲ့ ငကြောက်
ကျွန်တော်က သေမှာထက် ငွေမရှိတဲ့ဘ၀ကိုရောက်မှာပိုကြောက်သလို
ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တူတာဆိုလို့ အချိန်တန်ရင်သေမှာရယ်၊ သောကအကြီးအသေးတွေရယ်၊
အဲဒီ . . .
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ အရောင် (၃) မျိုးရှိတယ်
နွေလယ်နေ…၊ အဝေးမိုးသား ညို့ညို့….၊
မွေးရာပါ ဗီဇကို ဆင့်ပွားထားတဲ့
ထပ်ဆင့် နာမ၀ိသေသနတွေ ရှိတယ်
သူမကို ထိမယ့် မြား တစ်ချက် တစ်ချက် တိုင်းကို
လှေကြီးထိုး ရိုးရိုးမှန်မှန် ကာကွယ်ဖို့နဲ့
အပြင် ရန်သူကို သတ္တိနဲ့ တိုက်ရလွယ်သလောက်..
အတွင်း ရန်သူကို နှလုံးသား နဲ့ ငြိုငြင်ရ ခက်လွန်းတယ်
ငါတို့နဲ့ လွတ်ရာကင်းရာမှာ ကျပါတော့….။
တစ်ဘက်သတ် တည်ဆောက်ထားတဲ့ ရေတံခွန်
ကဗျာတွေကို ဖတ်ပြီးသွားရင် ရှေ့ပို့စ်မှာ မှတ်ချက်နဲ့အတူ ကြိုက်တဲ့ကဗျာတွေကိုလဲ ဗုတ်သွားပါဦးနော်